Manokatra any Memphis | ny fivarotana Apple-gen manaraka Avy amin'ny mac aho
Toy ny nitranga tamin'ny famolavolana ny Apple Store teo aloha, ny famolavolana ireo dia niova tsikelikely rehefa mandeha ny fotoana noho ny fampidirana antsipiriany kely izay mahatonga azy ireo hivoatra, na amin'ny fanamboarana fitaovana toy ny hoe tsy mijery afa-tsy ny ampahany kanto isika.
Ohatra iray izany ananantsika amin'ny dingana izay mankany amin'ny fampiasana fitaratra goavambe na amin'ny tohatra na amin'ny rindrina ivelany amin'ny fivarotana ka tafiditra ao anaty latabatra sy aseho na koa ny hazo fanovana jiro na ny fampidirana an-trano zavamaniry ao anaty trano araka ny hitantsika amin'ity Fivarotana Apple Brussels.
Ny tranga ankehitriny dia mifantoka amin'ny Apple Store any Memphis, aingam-panahy avy amin'ny famolavolana Jony Ive ary mety izany diniho ny "manaraka-gen", zavatra toy ny fivoarana izay efa notaterinay teo aloha ary mampiseho ny sasany amin'ireo zava-baovao ireo amin'ny singa famolavolana.
Ambony kokoa ny tafon'ilay magazay jiro mifantoka isaky ny latabatra izay mihetsika amin'ny fampiratiana, izay nalamina mba hampitomboana ny toerana sy ny faritra ilaina. Ireto latabatra nohavaozin'i Ive izao dia manana sensor mihetsika miaraka amina flip-up panels hanafenana ireo toeram-pamokarana herinaratra sy seranan-tsambo.
Afaka mahita vaovao ihany koa isika fampisehoana hazo Ampidirina anaty rindrina miaraka amina faritra izy ireo hanandramana headphone, dock ary vokatra hafa.
Na izany aza ny fisarihana lehibe indrindra Izy io dia efijery iray mitentina 1,5 tapitrisa dolara ary mihoatra ny 400 santimetatra napetraka ao ambadiky ny magazay miaraka amina matrix vahaolana avo lenta izay efa hitanay tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny 60 segondra niaraka tamin'i Tim Cook ary miaraka amin'ireo andalana ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Store » Misokatra ny fivarotana Apple-gen ao Memphis